Umqamelo kunye nomqamelo
Yintoni umahluko phakathi kwevelvet yaseNtaliyane kunye nevelvet yaseHolland
Zeziphi izibonelelo ze-velvet yaseDatshi: I-fluff yaseDatshi ityebile, ubungqingqwa obuqinileyo, ukuziva ngesandla ukuthambile, kukhululekile ukunxiba, kwaye kuhlala ixesha elide. Kukuzolula ngokwendalo ngaphandle kweenwele eziphalaziweyo, ezingenanto, kwaye akukho nto ivuselelayo emzimbeni womntu. Imfumba okanye imfumba ephambuka yevelvet yesiDatshi yima insepara ...
Yintoni ilaphu laseHolland velvet
Kutheni ibizwa ngokuba yiHolland Velvet? Yintoni ilaphu levelvet yesiDatshi? I-Holland velvet, i-velvet ephezulu, ineempawu ezininzi. I-suede ithambe kakhulu kwaye inobuhlobo bolusu, kwaye iphathaphatha isilika, ebhetele kakhulu kunevelvet yesiqhelo eyenziwe ngesilika. Kwangelo xesha, ityebile kwaye ibuthathaka, indibanisile ...
Yintoni ilaphu levelvet
Yintoni ilaphu levelvet, iimpawu kunye nolwazi lokugcina ilaphu levelvet yelaphu leVelvet lilaphu elaziwayo. NgesiTshayina, kuvakala velvet yeswan. Ukumamela eli gama, ukuba bakwinqanaba eliphezulu. Ilaphu leVelvet lineempawu zolusu-ezinobuhlobo, ezentofontofo, ezithambileyo kwaye ezishushu, kunye ne-enviro ...
Umnxeba:+86 575 84065333